Koox Premier League Ah Oo Danbasta Meydka Halyeey U Soo Ciyaaray Ka Dhistay Taalo Soona Bandhigtay Maanta - Laacib
HomeWararka CiyaarahaKoox Premier League Ah Oo Danbasta Meydka Halyeey U Soo Ciyaaray Ka Dhistay Taalo Soona Bandhigtay Maanta
Koox Premier League Ah Oo Danbasta Meydka Halyeey U Soo Ciyaaray Ka Dhistay Taalo Soona Bandhigtay Maanta
West Ham ayaa maanta soo bandhigtay taalo ay u dhiseen seddex ka mid ah halyeeyadii soo maray kooxda oo kala ah Bobby Moore, Geoff Hurst iyo Martin Peters iyadoo taalada laga taagay banaanka garoonka London Stadium.
Laakiin waxaa dad badan la yaab ku noqotay markii la shaaciyay in dambasta meydka Martin Peters in lagu daray aas-aaska taalada iyadoo Peters oo ahaa halyeey England u qaaday Koobka Adduunka uu geeriyooday bishii December 2019.
Reer galbeedka ayaa caado ka dhigtay sannadihii u danbeeyay inay gubaan meydka sida hindida oo kale, iyadoo ay arintu noqotay ka dar oo dibi dhal madaama danbastii meydka lagu dhex qasay sameynta taalo la suray garoonka banaankiisa.
Moore, Hurst iyo Peters ayaa ah seddexdii ciyaaryahan ee ugu fiicnaa ee abid soo maray kooxda West Ham United.
Seddexduba waxay udub dhexaad u ahaa Koobkii Adduunka ee ay England ku guuleysatay sannadkii 1966 oo ah koobka kaliya ee ay waligood qaadeen.
4-2 ayay ciyaartii finalka ku garaaceen West Germany, Moore ayaa kabtan u ahaa England waqtigaas, Hurst wuxuu dhaliyay seddexleyda kaliya ee laga dhaliyay finalka Koob Adduun halka Peters uu dhaliyay goolka kale.
Taalada loo sameeyay seddex nin waa Peters iyo Hurst oo garbaha ku sida More isagoo kore u haya koobka.